Apple inotumira mota dzayo kuSpain kunatsiridza Mepu | IPhone nhau
Kana iri zhizha iwe uri muVizcaya uye iwe ukaona kombi ine makamera pese padenga uye muhwindo rekumashure iwe unoverenga "Apple Mepu", nyemwerera pane kamera nekuti unenge uri pamufananidzo. Izvo ndezve mota dzeApple idzo dzinoona kuunganidza zvese zvakafanira ruzivo kuti uvandudze mamapu ekushandisa, uye kuti vachange vari mumwedzi waChikunguru naNyamavhuvhu vachishanyira dunhu iri.
Chii chaizvo chiri kuunganidzwa nemota idzi? Kwemwedzi vanga vachitaura nezve seApple Street View sevhisi, izvo zvinokutendera iwe kufamba nemumigwagwa nenzira yakafanana neizvo Google yatopa.. Kana kune izvi isu tichiwedzera iyo nyowani sarudzo iyo Mepu inopa muIOS 11, zvinoita sekunge tinogona kunge tiri munzira chaiyo.
Iyi nyowani yeRealual Reality sarudzo inoita kunge yakabatanidzwa muMepu pamwe nekumisikidzwa kweIOS 11 ingangoda ruzivo rwakawanda pamusoro pemigwagwa iyo inofanirwa kunge ichiunganidzwa "padanho reasphalt", uye idzi mota dzinenge dzichizvitarisira. Iko kune kutaura kweanogona akawedzera echokwadi basa rinogona kubvumidza kuona chaiyo mifananidzo yemigwagwa uye yakasimudzwa mirairo kuti usvike kwauri kuenda kana zvingangoitika nzvimbo dzekufarira munzvimbo.
Zvirongwa zveApple muSpain zvinogumira kuVizcaya ino mwaka wezhizha, uko sezvatinogona kuona mu webhusaiti yekambani Vachapfuura kubva munaChikunguru 1 kusvika Nyamavhuvhu 15, vachishanya munzvimbo dzakasiyana mudunhu reBasque. England, France neItaly dzimwe nyika dzeEurope uko Apple yakasiyawo mota dzakafanana, uyezve United States uko runyorwa lwenzvimbo rwakareba kwenguva ino yezhizha. Zvichida zvekuratidzwa kweiyo iPhone 8 munaGunyana isu taigona kutoona pfupiso yezvakagadzirirwa Apple neApple application, iyo yakaburitswa neIOS 6 uye yakabva yashanduka kuita zvirinani nenzira inopfuura pachena.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inotumira mota dzayo kuSpain kunatsiridza Mepu